Fanombanana ny fantsona YouTube - YTpals
Mila Fanampian'ny Manam-pahaizana YouTube?
Ity misy ohatra fohy amin'ny serivisy fanombanana YouTube…
Ny manam-pahaizana YouTube dia hanoratra ny tenany amin'ny horonantsary manome ny fantsonao YouTube fanombanana lalindalina sy 45+ fantsona YouTube & horonan-tsary + handinihana ireo mpifaninana aminao + drafitra hetsika 5-dingana ho an'ireo dingana manaraka.
VIDIO IZAO • 120 $
Ny horonan-tsarinao minitra 45+ dia misy:
Iza no tokony hividy tomban'ezaka YouTube Channel Evaluation?
YouTuber kely ve ianao sahirana mampitombo ny fantsonao?
Manandrana mahita fomba fijery misimisy kokoa ve ianao fa tsy azonao antoka izay hatao?
Manana fanontaniana momba ny lampihazo ve ianao nefa tsy mahalala olona azonao apetraka?
Raha izany dia ho anao ny serivisy fanombanana ny fantsona YouTube.
Ny manam-pahaizana dia YouTubers tenany, izay manana fahitana an-tapitrisany amin'ny YouTube, mpanjifa manakaiky ny 1 tapitrisa ary namorona horonantsary nandritra ny taona maro.
Mahafantatra ny ao anatiny ny YouTube ary hizara ny fahalalany aminao izy ireo rehefa mandinika tsara ny fantsona YouTube anao amin'ny horonan-tsary.
Inona no homenao ahy rehefa avy mividy an'ity serivisy ity aho?
Hanao horonantsary 45+ minitra momba anay izahay izay mamakivaky sy manombana ny fantsona YouTube anao. Avy eo, hampakarinay any YouTube izy io, ataovy tsy miankina ny horonantsary (ho anao irery ihany) ary handefasanao rohy mankany ianao hahafahanao mijery ny fanombatombananao isaky ny manana fotoana malalaka ianao!
Aorian'ny nametrahanao ny kaomandinao dia matetika no maharitra 3-7 andro hamitana ny fanombanana ny Channel anao.
Inona no miavaka ampidirina ao amin'ny Tombaniko Channel?
1) Hizaha ny horonan-tsarinao izahay ary hanome anao fitsikerana mahasoa.
2) Torohevitra momba ny fomba ahafahanao manatsara ny horonan-tsarinao mba hampitomboana ny fotoana fijerena sy fitazonana ny mpijery.
3) Hodinihinay ny lohateny sy ny sary kely, ny paikadin'ny votoatiny, ny teny lakile ary ny famaritana, ny pejy fandraisana sns.
4) Hizara ny tsiambaratelonay momba ny fampiroboroboana ny horonan-tsarinao izahay sy hahazoana mpamandrika.
5) Hodinihinay ny mpifaninana aminao ary holazainay aminao ny fomba hahatongavana ho tsara kokoa noho izy ireo.
6) Drafitra hetsika 5-dingana!
Ianao ve mila ny mari-pahaizana momba ny fidirana amin'ny fantsona YouTube?
Tsia, tsy mila mari-pahaizana momba ny fidirana izahay. Tsy miditra amin'ny fantsonao YouTube izahay.
Hanome anao horonantsary 45+ minitra momba anao izahay handinihanay tsara ny fantsonao ary azonao ampiharina ireo hevitra / fanovana atolotray ho anao araka ny tokony ho izy.
Afaka miasa amin'ny karazana fantsona YouTube ve ianao?
Eny! Miara-miasa amin'ny karazana fantsona YouTube rehetra izahay ary afaka manampy anao hampitombo ny anao, na inona na inona akany misy ny atiny.
Afaka manome tombana amin'ny fantsona tsy anglisy ve ianao?
Ie! Hizaha ny fantsonao amin'ny horonan-tsary izahay ary hiteny Anglisy, fa kosa kosa hanome dikanteny dikanteny amin'ny fiteny tianao.
Io dia hahafahanao mijery ny horonan-tsary, eo am-pamakiana ireo dikanteny mba hahazoana antoka fa azonao tsara izay lazainay.
Ny rindrambaiko fandikan-teny ampiasainay dia tena tsara ary hanao asa tena tsara handika amin'ny fiteny tianao. Ho azonao tsara izay lazainay amin'ny fanombatombanana anao.